T'Challa စတားသခင်ဘုရားမော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
T'Challa စတား - Lord
30 / 08 / 2021 30 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 271 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, သေးသေးလေး, စတား-သခင်ဘုရား, Thanos, T'Challa စတား - Lord, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
29 / 08 / 2021 29 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 244 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Black က Panther, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဒိုမီလာဂျေ, Kraglin, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, အသေးစား, သေးသေးလေး, Nebula, စတား-သခင်ဘုရား, မျက်နှာစာ, Thanos, T'Challa စတား - Lord, Wakanda, Yondu
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ရော့ Paton 389 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
Lego 71031 Marvel Studio's T'Challa Star-Lord သည်သေးငယ်သည့်အသေးစိတ်တစ်ခုပျောက်ဆုံးနေသည်
22 / 08 / 2021 22 / 08 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 251 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego, Lego မှ marvel, LEGO.com, Marvel, စျေးဝယ်, T'Challa စတား - Lord, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
အခုငါတို့ဒုတိယအပိုင်းကိုကြည့်ပြီးပြီ Marvelဘာဖြစ်တာလဲ ... ဘာလဲ၊ သေးငယ်တဲ့ (ဒါပေမယ့်အရေးကြီးတဲ့) အသေးစိတ်တစ်ခုပျောက်ဆုံးနေတာကိုငါတို့သတိထားမိခဲ့တယ်
18 / 08 / 2021 19 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 199 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, 76020 Knowhere Escape မစ်ရှင်, 76079 Ravager တိုက်ခိုက်မှု, 76080, 76080 Ayesha ရဲ့လက်စားချေ, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, အုတ်ခဲ, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, အုပ်ထိန်းသူများ, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, က Galaxy Vol ၏အုပ်ထိန်းသူများ။ 2, Heist, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego မှ marvel, Marvel, Nebula, Peter Quill, စတား-သခင်ဘုရား, မျက်နှာစာ, Thanos, T'Challa စတား - Lord, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, Yondu
18 / 08 / 2021 01 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 570 Views စာ0မှတ်ချက် 60302 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစစ်ဆင်ရေး, 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, 71031 Marvel စတူဒီယို, 76021 Milano အာကာသယာဉ်အားကယ်ဆယ်ရေး, 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, 76237 Sanctuary II ကို, မိကျောင်း Loki, Black က Panther, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, City, Clone Trooper ဖြစ်သည်, ကော်ဖီခွက်, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, အီစတာကွကျဥ, ဖါး, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, ရဟတ်ယာဉ်, Lady Loki, Lego, Lego CIty, LEGO CMFs များ, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Minecraft, Lego Minifigures, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego သုံးသပ်ချက်များ, Lego Spider-Man, Lego Star Wars, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Minecraft, အသေးစား, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, ဆန်းစစ်ခြင်း, reviews, ဆမ် Wilson, Spider-Man, Star Wars, စတား-သခင်ဘုရား, streaming များ, superhero, Superheros တွေက, ဓားကို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါ Marvels, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, Throg, အချိန်ကှဲလှဲအာဏာပိုင်, T'Challa စတား - Lord, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, Wanda, ဝမ် Maximoff, WandaVision, အဖြူရောင်အမြင်, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
11 / 08 / 2021 11 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 214 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
28 / 07 / 2021 28 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 538 Views စာ0မှတ်ချက် 71026, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Dc, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego DC က, Lego မှ marvel, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey